Khalifa Xaftar: Janaraal ka badbaaday Qadaafi hadana loo maara la’yahay | Hangool News
Khalifa Xaftar: Janaraal ka badbaaday Qadaafi hadana loo maara la’yahay
Janaraal Khalifa Xaftar kaas oo xoogaggiisa ay dagaal adag kula jiraan dowladda ay Qaramada Midoobeey taageereyso ee caasimadda dalkaas, wuxuu ka tagay magaalada Moscow isagoo aan saxiixin heshiiska xabad joojinta, sida ay warbaahinta sheegeen.
Kullamadii ay wada yeesheen Janaraal Xaftar iyo dowladda, waxay Moscow ka bilowdeen Isniintii.
Ruusha oo taageeraya Janaraal xaftar iyo Turkiga oo taageeraya dowladda, ayaa dadaalkaas keenay si xabad joojin loo saxiixo.
Ujeedada waxay ahayd in la soo afjaro dagaalka sagaalka bilood ka socda nawaaxiga caasimadda Liibya ee Tripoli.
Rabshadaha waxay bilowdeen bishii April, xilligaas oo Xaftar uu ku dhawaaqay in uu qaadayo duullaan uu magaalada kaga qabsanayo dowladda ay Qaramada midoobeey taageereyso.
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, wuxuu ku hanjabay in uu “cashar adag u dhigi doono” Janaraal Khalifa Xaftar, haddii uu joojin waayo duullaanka uu ku yahay Tripoli.
Doorka dalalka caalamka ee ku lugta leh qalalaasaha Liibiya, waxaa la ogaaday bilihii la soo dhaafay, iyadoo baarlamaanka Turkiga ay meel mariyeen tallaabo muran uu dhaliyay oo ciidamo ay ugu direyso Trimpoli si ay u difaacaan dowladda.
Sidoo kale, Janaraal Khalifa Xaftar, wuxuu taageero ka helayaan Masar, Sacuudiga, Imaaraatka Carabta iyo Urdun.
Arrintaas waxay dhalisay cabsi ah in dalkaas qaniga ku ah shidaalka uu gole dagaal u noqdo qalalaasaha wadamo kale u dhexeeya.
Janaraal Khaliifa Xaftar oo qayb ka ahaa siyaasadda Liibiya muddo ka badan afartan sanno ayaa wuxuu noqday nin ay warbaahinta caalamka aad u hadal hayeen maalmihii lasoo dhaafay.
Ciidamo ka amar qaata isaga ayaa la wareegay maamulka saldhigyada saliidda ugu waaweyn ee dalkaasi Liibiya, iyadoo ujeedkeedu uu ahaa, in dalalka saaxiibka la ah ay u dhoofiyaan shidaalka uu dalkaasi qaniga ku yahay, waxana ay saldhigteen magaalada dhinaca bari ku taalla ee Tobruk.
Inkastoo Xaftar uusan xilligaas lahayn awood uu qorshihiisa ku hirgeliyo, hadana hadaladiisa ayaa dhaliyay caro, gaar ahaan magaalada Benghazi oo dadkii ku noolaa ay niyad jabtay sidii ay GNC iyo dowladeedaba ugu guul darreysteen in ay la dagaallamaan Islaamiyiinta.
Wixii hadda ka horeeyay caannimada Janaraal Khaliifa Xaftar ma dhaafsiisaneyn Libya, inkastoo xiriir hore uu la lahaa Qadaafi iyo Mareykanka, balse hadda oo ay ciidammadiisa ay ku sii siqayaan Caasimadda, wuxuu noqday janaraal indhaha caalamku ay eegayaan.
Image captionDagaalka Libya
Bishii May ee sannadkii 2014-kii wuxuu Haftar bilaabay howlgal uu ugu magac daray Mabaadi’da Sharciga oo looga soo horjeeday kooxaha Islaamiyiinta ah ee fadhigoodu ahaa Benghazi iyo Barigeeda.